Karisma Kapoor oo soo rogaal celisay, xogta nolosheedana shaaca ka qaadday |
Karisma Kapoor oo soo rogaal celisay, xogta nolosheedana shaaca ka qaadday
Atarashiishada caanka ah ee Hindiya, Karisma Kapoor, ayaa sheegtay inay jeceshahay in ay indhaha dadka ka gabato marka ay nolosheeda dhabta ah ku jirto, dadkuna ay aad ula yaabaan marka ay dabeecadda ay lasoo baxdo marka ay shaashadaha kasoo muuqato.
Haweeneydan ay dadk badan jecel yihiin hab jilliinkeeda ayaa hadda dib usoo rogaal celisay, waxayna kasoo muuqan doontaa musalsal cusub, sida aan ku sharrixi doonno qormada hoose.
Wareysi ay siisay warbaahinta Film Companion ayey ku tiri; “Waligeyba waxaan ahaa qof xirxiran oo aan dadka dhex galin, haddana sidaasoo ay tahay waxaan ahay atariisho. Dadku marka ay i arkaan way naxaan, waxayna i dhahaa ‘sidey ku dhacday in aad qoob ka ciyaar sameysid ama aad heetsid?’ sidoo kale waligey kama helin inaan xirto dharka garbaha go’an ee qaarka hore laga xirto. Marka aan filimada ku sameynayo xitaa kuma qanacsani. Waxaan ahaa qof aad u ilaaliya dhaqanka iyo diinta”.
Karisma ayaa hadda barteeda Instagram-ka ku leh 5 malyan oo taagerayaal ah, waxayna mar mar usoo dhigtaa sawirradeeda, inkastoo ay dabeecad u gaar ah leedahay. Hase yeeshee waxay caddeysay in aysan waligeed nolosheeda oo dhammeystiran kusoo bandhigi doonin baraha bulshada, si adduunka oo dhan looga arko.
“Waxaan sidoo kale jeclahay inaan la jaanqaado wakhtiga. Runtii taasna muhiim ayey ii tahay aniga, qof ahaan. Waxaa la joogaa xilli casri ah, waa sax, laakiin haddana waa inaan ka fiirsado waxa aan soo dhigayo iyo waxa aanan soo dhigeynin”, ayey tiri.
Wakhti xaadirkan, Karisma waxay isku diyaarineysaa inay ka qeyb qaadato musalsal cusub oo ku bixi doona dhinaca Internet-ka, kaasoo uu sameynayo website-ka ALTBalaji.
Musalsalkan, oo lagu magacaabay Mentalhood, waxaa hagi doona Karishma Kohli.
Filimkan ayaa lagu matalayaa waxyaabo ku saabsan caqabadaha soo wajaha waalidiinta marka ay carruurtooda korinayaan.
Karisma ayaa musalsalkan ku matali doonto haweeney la furay oo dooneysa inay carruurteeda waalid ahaan u maamusho. Sanjay Suri ayaa isagana ku matali doona inuu yahay seygeeda.
Jilayaasha kale ee kasoo muuqan doona filimkan waxaa ka mid ah Dino Morea, Shruti Seth, Sandhya Mridul, Shilpa Shukla iyoTillotama Shome.
Waxaa la filayaa in xaladaqada ugu horreysa ay soo baxdo 11-ka bishan March, lagana daawado bogagga internet-ka ee ALTBalaji iyo Zee5.
Filimkii ugu dambeeyay ee ay toos Karisma ugu sameyso shirkadda Bollywood-ka wuxuu ahaa Ishhq, oo soo baxay sanadkii 2012-kii. Hase ahaatee waxay si khaas ah oo kooban uga soo muuqatay filimka Bombay Talkies, oo soo baxay 2013-kii iyo Zero oo soo baxay 2018-kii.
"Damaca Abiy Ahmed ee Dekedda Saylac waxa Hakiyey Dagaalkii Tigrayga…